Gunsel B9 ewebataara anyi ulo nke TRNC | RayHaber | raillynews
HomeỤWAAsia90 TRNCGunsel B9 ewebataara anyi ulo nke TRNC
21 / 02 / 2020 90 TRNC, Asia, ỤWA, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, akpakanamde
ktlọ egbe eji egbe n’ụlọ kktc mee
Emere ka “Günsel”, ụgbọ ala na nke mba Republic of Northern Cyprus na nzukọ a na-eme ebe a na Mahadum Girne Elexus. Ihe atụ mbụ nke Günsel, nke ndị injinia Turkish na ndị na-ese ya rụpụtara, bụ ndị nwere afọ iri na arụ ọrụ na nde awa 10 n'ime ọrụ dị nso na Mahadum Near East, bụ nke edo edo, acha anụnụ anụnụ na acha ọbara ọbara nke na-egosipụta ala, elu-igwe na ọkọlọtọ nke TRNC. Ekelere atụmatụ na ime ụlọ nke Günsel B1,2.
Prime Minista Ersin Tatar, Onye Isi Nri nke Atọ Dr. Dervis Eroglu, na Republic of Turkey nnochite anya na Nicosia, Ali Murat Başçer, Deputy Prime Minister na Foreign Minister Kudret Ozersay, Education Minister Nazim Cavusoglu, Minister nke Finance tozuru okè Amcaoğlu, Interior Minister Aysegul Baybars Kadri, Public Works na Transport Minister Tolga Atakan, Economy na Energy Minister Hassan Taçoy, Minista na-ahụ maka njem na gburugburu Dt. Ünal Üstel, Mịnịsta nke ọrụ ugbo na akụ na akụ sitere n'okike bụ Dursun Oğuz, Mịnịsta na-ahụ maka ọrụ na Social Security Faiz Sucuoğlu, isi mmegide Republican Turkish Party Onye isi ala Tufan Erh Turkishrman, Onye isi ụgbọ mmiri nchekwa nke Cypriot Peace Onye isi agha General General Sezai Öztürk, Kọmịshụche ndị agha nchekwa Tuğgeneral Altan Er na osote onye isi Republican Assembly Zorlu Ihe dị ka puku ndị ọbịa atọ si Turkey na mba ndị ọzọ gara n'abalị nkwalite nke Günsel, nke Töre gara.
Na nso nso Mahadum East, onye isi oche nke Board of Trustees Dr. İrfan Suat Günsel: “Nna anyị bụ Dr. Nrọ nke Suat Günsel; Site n’ichepụta ọnụ, anyị agbanweela n’ezie site n’iji ahụ, otu obi, na nnukwu okwukwe arụ ọrụ ehihie na abalị. ”
Na nso nso Mahadum East, onye isi oche nke Board of Trustees Dr. İrfan Suat Günsel kwuru okwu n’abali ebe a na-ewebata Günsel B10, nke ndị injinia Turkey ji afọ iri nke R&D na ọmụmụ ihe. Nrọ nke Suat Günsel; Site na imewe gaa R&D, site na teknụzụ ruo injinịa ọnụ, anyị gbanwere ghọọ eziokwu site n'iji otu ahụ, otu obi, na nnukwu okwukwe; Anyị bi na nsọpụrụ, nganga na obi ụtọ nke ike ikerịta GÜNSEL n'etiti gị, mba anyị, ala anyị na ala nna anyị ma mee ka a mata ụwa n'ụzọ siri ike. ”
N'ikwupụta na mmezu nke nnukwu ọrụ dị ka Günsel bụ otu n'ime ihe ngosi kachasị bara uru nke sayensị na-eweta ike sayensị nso. Dr. İrfan Suat Günsel kwuru, "Na nso nso Mahadum East na Mahadum Girne abụrụla mahadum ndị kachasị ibu na mmepe mmepe na-ewere ọnọdụ ha n'etiti mahadum ndị a na-akwanyere ùgwù n'ụwa. O nwere akụrụngwa teknụzụ na akụrụngwa nke ga-arụ n'otu oge ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku puku abụọ e bipụtara na akwụkwọ ndekọ mba ụwa na ọrụ 385 ugbu a. "
Ikike mmepụta nke Günsel, nke mmepụta ya ga-amalite na 2021, ga-eru ụgbọ ala 2025 kwa afọ na 20. N'abalị nke mmalite nke Günsel ihe nlereanya mbụ B9, a na-egosi ndị ọbịa ahụ ihe ngosi nkwado nke abụọ nke J9, nke edobere nzuzo ruo taa. Usoro mmepe nke J9, nke emere dika SUV, ezubere ka emechaa ya n’azu 2022 ma na akwadoro nkwalite onwa. Na nso nso Mahadum East, onye isi oche nke Board of Trustees Dr. Na ngosiputa İrfan Suat Günsel n’abali, ekwuputara na nrụpụta nke igwe J9 nke abụọ ga-amalite n’afọ 2024.
Mgbanwe Günsel nke Turkey Republic of Northern Cyprus ga-abụ otu n'ime mba na-ebupụ akpaaka ga-eme nnukwu nnabata maka akụ na ụba mba ahụ. N’aka otu, Günsel ga-enye TRNC nnukwu ego nke ego ebubata ya na ụgbọ ala ọ ga-ebuga na mba ofesi, na Günsel, nke a na-eji eme ihe n’obodo, ga-ebelata oke nke mmanụ ebubata. Maka nke a, Günsel nwere ikike nke ukwuu belata ntụpọ ahia mba ofesi site na ntinye ntinye aka na akụnụba nke TRNC. Ego mbupụ ọ ga-emepụta, akụ na ụba nke ụlọ ọrụ na-eweta ngwa ahịa ga-ehiwe ya na ọrụ a ga-eweta ga-eme Günsel ka ọ bụrụ otu n'ime ihe kacha mkpa nke akụ na ụba TRNC.
Prime Minista Ersin Tatar: “Dị ka Turkey Republic of Northern Cyprus, anyị emeela nnukwu aha na nnukwu dike. Onye ọ bụla kwesịrị ikweta na Suat Günsel, onye na-arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ kemgbe ọgụ ahụ, ma na-arụ ọrụ maka Turkish Republic of Northern Cyprus, bụ otu n'ime ndị dike ndị a. Enwere ọtụtụ nsogbu na-adịghị mma maka Saịprọs anyị na Eastern Mediterranean. Akụkọ ihe ịga nke ọma a bịanyere aka na ya ebe a na-eme ndị na-ekwu okwu ọjọọ ihere. N'ihi na anyị na-enwe ihe ịga nke ọma, anyị bụ ụmụ na-aga nke ọma nke mba na-aga nke ọma, onye na-anabata obodo ya, kwenye na izu oke ma nwee onyinye. Lee Turkish Republic of Northern Cyprus! Taa anyị na-agba ama akụkọ ihe mere eme. Günsel ga-enyere nnukwu aka na mbupụ mba anyị, ọrụ, akụnụba na mmepe. Ọ ga-amasị m ikele ndị ezinụlọ Günsel, bụ́ ndị rụzuru nnukwu ihe ịga nke ọma. ”
3. Onye isi oche nke TRNC Derviş Eroğlu: "Anyị tọrọ ntọala na Suat Günsel na Mahadum nke dị nso na East East n'oge m nọ n'isi m. Kemgbe ụbọchị ahụ, Suat Günsel na ezinụlọ ya ekenyela ọtụtụ ihe nke na anyị echefuru ọnụ ọgụgụ ahụ. Suat Günsel na-agbaso ihe kachasị mma na ọrụ ọ bụla si mahadum gaa ụlọ ọgwụ. Günsel Family nwere ike ịnwe nganga maka ọrụ nke mbinye aka a abawanyela na ya. Ka ihe ịga nke ọma gị bụrụ nke na-adịgide adịgide. ”
Nnochite anya nke Republic of Turkey Ali Murat Başçer nke Nicosia: “Ahịa ụgbọala nke ụwa dị n'ụzọ ọhụrụ. President of Turkey Mr. Recep Tayyip Erdogan, Turkey si anụ ụlọ ụgbọala dị ka o kwuru ná nzukọ na December 27 tOGGer ẹkenam taa, onye ọ bụla bụ hà abanye n'ọsọ a. Günsel, nke Mahadum dị nso na East East bịanyere aka na ya, ga-emepụta ihe atụ dị mkpa maka mmepe teknụzụ, R&D, na ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka mahadum anyị niile. Eji m obi m niile na-ekele ndị enyemaka.
Tufan Erhürman, Onye isi oche nke Republican Turkish Party: “Taa, anyị na-ahụ nrọ na-emezu ebe a. M na-ekele ndị niile nwetarala nganga a. Ileta ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ahụrụ m ndị injin na-eto eto ka ha ji obi ụtọ na-arụ ọrụ na mbido ọrụ ha. Ana m ekele ha niile. Anyị na-ekwukarị na onye na-emepụta anaghị akwụsị. Günsel Family na-aga n'ihu na-emejuputa atumatu akpọrọ nke agaghị ekwe omume. M na-ekele ezinụlọ ahụ dum maka ihe ịga nke ọma ha. ”
Kudret Özersay, onye otu Mịnịsta Ala na Mịnịsta nke Ofesi: “Turkey Republic of Northern Cyprus na ndị ya chọrọ karịa otu akụkọ na-aga nke ọma. Günsel bụkwa akụkọ mmeri dị mkpa sitere n'ike mmụọ nsọ. Na nnọchite steeti anyị, achọrọ m ikele onye ọ bụla bịanyere aka na akụkọ ihe ịga nke ọma a, karịsịa ezinụlọ Günsel. Etinye ụdị ego a chọrọ ọhụụ dị ukwuu. Ha na Günsel gosipụtara etu ọhụụ Gionsnsel Family na ọhụụ Mahadum dị nso si dị. ”
Hasan Taçoy, onye Minista akụ na ụba na ike: "Günsel bụ nnukwu ọrụ maka akụnụba obodo anyị nke anyị ga-ekwere ma chebe ruo ọgwụgwụ. Suat Günsel, onye wetaworo ụkpụrụ dị oke mkpa n'obodo anyị ruo ugbu a, ewetarala mba anyị nnukwu uru site na ịrọ nrọ onye nkuzi ya na ezinụlọ ya na ịrụsi ọrụ ike iji mezuo nrọ a. Iswa na-agbanwe. Ọ mara oke mma ịnweta ọrụ ụgbọ ala eletrik ga-esite na anyanwụ dịka obodo nke anyanwụ. Ya mere, anyị kwesịrị ichebe ọrụ a, nke anyị gbaworo àmà ka ọ ghara ịrọ nrọ mezuru. ”
Minister nke Labour na Social Security Faiz Sucuoğlu: “Mgbe mụ na onye nkụzi m Suat Günsel na-akparịta ụka afọ ole na ole gara aga, ọ gwara m na otu ụbọchị ọ ga-ewepụta ụgbọ ala. Mgbe m gwara ya na ọ dịghị nfe, o kwuru na ya ga-eme ka nrọ m mezuo. Lee, anyị na-ahụ ka ọhụụ nke nrọ a. Akụkọ banyere Günsel, nke malitere site na ndị injinia iri ma soro ya na ndị injinia 10 taa, ga-eru ọtụtụ puku ndị injin na afọ na-abịanụ. Günsel ga-emeghere anyị ụzọ iji mee ka ndị ntorobịa nọ na mba ahụ nwee ọrụ ọ ga - eweta site na ntinye aka na mbenata enweghị ọrụ ndị ntorobịa, nke ruru pasentị iri na iteghete na mba anyị taa. ”
IWU NA EGO
Günsel nke mbụ B9 bụ ụgbọ ala eletrik dị narị narị. Thegbọ ahụ, nke nwere ike ịga njem kilomita 100 na otu ụgwọ, emere ya site na ijikọta 350 iberibe 10 na mkpokọta. Injin nke ụgbọ ahụ bụ 936 kW. Ọsọ ọsọ Günsel B140, nke nwere ike iru 100 km kwa elekere na sekọnd asatọ, bụ nke elektrik na-erughị 8km kwa elekere. Enwere ike ịgba batrị Günsel B9 naanị nkeji iri abụọ ka odori ngwa ngwa. Ọ bụrụ na eji chaja ọkọlọtọ, oge a bụ awa 170. Edebere nkwekọrịta n'etiti ndị na-ebubata 9 site na mba 20 maka mmepụta Günsel B7, ebe ihe karịrị injinịa 100 ji awa 1,2 nde na mmepe.
Carsgbọ ala eletrik na-abawanye ibu na ahịa ụgbọ ala ụwa kwa afọ. Onu ogugu nke ugbo ala eletrik rere ere n’uwa n’aho 2018 bu nde abuo. Ahịa ụgbọ ala eletriki, nke a na-atụ anya iru nde 2 na 205, a na-atụ anya iru nde 10 na 2030 na nde 28 na 2040. Carsgbọ ala eletrik ga-ejide pasent 56 nke ahịa ụgbọala na 2040.
2019 Günsel, nke mbụ nke ụmụ amaala nke TRNC
Günsel gosipụtara ụgbọ ala mbụ nke TRNC
Obodo mbụ ụgbọ okporo ígwè TRNC bụ Günsel ga-aga n'okporo ụzọ na 2018
E guzobere Museum nke Ugbo ala nke GUNCEL, Gunsel Art Museum.
Peker: "TÜDEMSAŞ na-ewu National Wagon ar
89% nke ụmụ amaala chọrọ ịzụ ụgbọ ala
Onye isi ala Erdoğan: 'Anyị Ga - ewetara Domgbọ ala ụlọ maka Ọrụ nke Mba Anyị'
Turkey si Cars Ga-Electric SUV
Ụgbọ ala eletriki
Turkish Republic nke Northern Cyprus
Na nso Mahadum East
Bosphorus Express Ga-ebido Izugbe?